जय प्रेम, प्रेम गर्नेहरुका नाममा
कोसिका शर्मा, क्यानडा--
जिवनलाई पाँच ईन्द्रीयहरुले के भन्छन् अनि यो पाँच मध्य एक नभए हामीलाई के नाम दिइन्छ ? यसलाई बुझ्ने हो भने हामीले गर्ने प्रेम कसलाई र किन भन्ने सवाल हुन सक्ला र ? तपाई सङ्गसङ्गै भएको मान्छेले तपाईलाई प्रेम गर्नुपर्छ । यो तपाईं भन्नुहुन्छ र कयौंले भन्नलान् तर तपाइँलाई थाहा छ प्रेम के भन्छ ? प्रेम भन्छ म कुनै सम्बन्धमा हैन म सम्बन्धित पनि छैन । म एक भाव हु जहाँ मलाई ठिक लाग्छ म त्यही प्रेमको भूमिका निर्वाह गर्छु । यस आधारमा प्रेम नै गलत छ, प्रेम गर्ने मान्छे भन्दा तर जब प्रेम नै गलत भनिन्छ अनि हामी प्रेम बिनाको हुनेछौं । जुन सम्भावना नै छैन । यहाँ माफ माग्ने र दिनेमा प्रेमलाई लिएर कुनै त्रुटि नहोस्, कुनै प्रेमलाई थाहा पाएर थाहा छैन भनेरै सच्चिन दिनुहोस् । त्यहाँ प्रेमले तपाईलाई माया गर्न मद्दत गर्ने छ तर थाहा हुँदैमा प्रेम र त्यो प्रेमीलाई उदाङ्गो नगर्नु होला । त्यसले अर्को रुप लिनेछ, जहाँ तपाइँ देख्नु सक्नु हुनेछ तर सोच्न सक्नुहुन्न । गल्तिको सजाय दिने क्रममा तपाईले दिएको सजाय भन्दा पहिल्यै कुनै सजाय बन्न सक्छ जुन फर्केर न आउन सक्छ । कोही सदालाई मेटिन सक्छ । त्यसैले हरेक सजाय देखिने गरि हुनैपर्छ भन्ने छैन, जीवन प्रेममय छ भने प्रेमलाई कहाँ लुकाएर राख्ने ? के हरेक प्रेम सम्बन्धितलाई गर्न बनाएको नै प्रेम हो त ? के प्रेमको आकार प्रकार त्यसैमा निर्मित छ ? प्रेममा जसरी जातभात हुन्न त्यसरी नै उमेर हुन्न अनि बनावट हुन्न अनि अन्धो या लङ्गडो हुन्न भने प्रेम कसलाई किन र कसरी भन्ने सवाल रहला र ? रहँदैन भने प्रेमलाई गल्ती भनिने ठाउँ कहि नभएरै छ भनिन्छ भने त्यो गल्तिको सजाय प्रेम गर्नेलाई भन्दा थाहा हुनेलाई बढी हुनेछ । प्रेममा त्याग हुन्छ र हरेक त्याग जीवन हैन, प्रेममा भावना हुन्छ जुन व्यक्त हैन, बुझाई हो, प्रेममा छोरा छोरी सबै भएरै, प्रेम एक अर्को पनि हो जुन फरक हुन्छ । जहाँ कुनै ब्यक्तिको काल्पनिक रुप बन्छ र त्यो रुपको सधैं आश, विश्वास ब्यक्त हुन्छ ।
कुनै अर्कै रुपमा त्यो रुप देखिनु नै कोहि अरुसम्ग्ग प्रेम हुनु हो त्यहाँ भावना हुन्छन्, चाहाना हुन्न । त्यहाँ कसैलाई छोड्ने र कसैलाई जोड्ने योजना हुन्न बस् प्रेम हुन्छ । प्रेम प्रेमी र प्रेमिका बिच या श्रीमान श्रीमती बिचमात्रै हुन्छ र हुनुपर्छ भनिन्छ भने त्यो प्रेमको लागि बन्धित प्रेम बन्न्ने खतरा बढी छ । प्रेमको खुल्ला रुपमा तिमीले जबसम्म समर्थन जनाउदैनौ तबसम्म प्रेमले तिमीलाई नकारात्मक देख्ने छ अनि तिमीले प्रेमलाई । प्रेमलाई स्वीकार गर, प्रेमले हार्ने छ अनि तिमी जित्ने छौँ ।
तिमीले आजसम्म दिएको पैसा, हरेक मागेको कुरा, अनि हरेक आवश्यकता नै प्रेमलाई पाउन थियो तर प्रेमले खासमा के चाहेको हुन्छ त्यो न तिमीलाई थाहा हुन्छ, न प्रेम गर्नेलाई नै । त्यसैले तिमीले चाहेको अरुले पाउनु नै तिमी प्रेमको परिक्षामा फेल हुनु हो, त्यसको प्राप्ती तिम्रो आबेग हुन जाँदा त्यसले घृणाको रुप लिन्छ तर तिमी केही शान्त भएर आफुलाई सम्हाल्न सक्छौ भने तिमीले चाहेको प्रेम तिमीले चाहे जसरी नै हुनुमा कुनै सन्देह छैन ।
प्रेममा आउने जो कोहि तिम्रो नजिकका या परका उस्तै हुन र तिनीहरु आफै बसमा हुन्न, यो प्रेमको रुप हो यसलाई गाली या कुनै भनाईले परिवर्तन गर्न नखोज्नु नै राम्रो, आफुलाई थाहा जस्तै गरि कति कुरा भुलाउनुमा तिमीले गुमाएको सबै कुरा पाउने कुनै ठाउँ छ भने प्रेमपूर्ण गल्तिलाई प्रेमले नै सजाएर राख्नु न कि बाहिर आउन दिनु । बाहिर आउनु नै हिजो तपाईको बसमा भएको कुरा पनि बसमा हुने छैन, जसले तपाईं बाट नै प्रेम लोप हुनेछ । प्रेमलाई अन्त्य नसम्झनु यो शुरुआत हो, प्रेम पुरानो हुन्न यो सदा नयाँ रहन्छ । प्रेम गर्नु गल्ती हो किन कि प्रेम आफैले गल्ती स्विकार्छ , ब्यक्ती त यसको भूमिकामा बाँधिएका हुन्छन् । प्रेम लेखान्त हो त्यैसले यो के भयो भनेर तपाईंलाई थाहा नभएको भैसकेको हुन्छ, जुन तपाई त्यो गल्ती लाग्छ तर र स्वयम् प्रेम गर्नेलाई तर प्रेमलाई गल्ती लाग्दैन । प्रेम सादा छ, क्लिष्ट छ, प्रेम फूल हो, काँडा हो । त्यसैले आफुलाई प्रेमले हेर्नुहोस्, प्रेमलाई बुझ्न प्रेमको माया गर्नु होस्, प्रेमलाई घृणा गर्नेले आफुलाई माया गर्न सक्दैन । प्रेम श्रीमान र श्रीमती हैन, यो एक हेराइ, हिडाइ र बोलाइ र लेखाइमा आधारित पनि छ । प्रेमलाई तौलिदा प्रेमले तपाईंलाई तौलिसकेको हुनेछ । प्रेम लुक्दैन प्रेमलाई लुकाइदा उजागर भैसकेको हुनेछ । अब देख्नेले प्रेमलाई सजायको परिकल्पनाको आधार बनाएको हो भने गल्ती अब हुने छ, प्रेम गर्ने हैन ।
अन्त्यमा प्रेम प्रसङ्ग हैन, यो पबित्र अनुभूति हो, प्रेम सम्बन्धित हुन्न यो समय र लेखाईको गुण हो, प्रेम भोगाई हैन, यो भोगाईमा आउने एक अति नै प्रिय जितको सन्तुलन अवस्था हो । जहाँ जिन्दगी हार्न सक्छ प्रेम हार्दैन । प्रेमलाई घृणा गर्नेले, प्रेमको चाहाना राख्ने सँग पनि घृणा नै पाउनु पर्ने हुन्छ । जय प्रेम ।